Apple hanatontosa ny fivoriamben'ny tompon-trano ao amin'ny Steve Jobs Theatre | Avy amin'ny mac aho
Apple hanatontosa ny fivorian'ny tompon-trano amin'ny Steve Jobs Theatre
Araka ny hitantsika ao amin'ny pejy Apple ho an'ny shareholder, Mikasa ny hanao ny fivorian'ny General shareholder ao amin'ny Steve Jobs Theatre ny orinasa. Ity fivoriana ity dia atao isan-taona, ary manolotra ny vokatra ara-bola azon'ny orinasa tamin'ny taona lasa, ary eken'ny ekipa mpitantana mialoha. Ny daty napetraka dia ny 13 Febroary ho avy izao ary ny orinasa dia misaotra an'ireo tompon-trano tamin'ny fanohanany tamin'ny alàlan'ny fitazonana ilay Steve Jobs Theatre vao nosokafana tao am-pon'ny orinasa.
Izy io no hetsika ofisialy faharoa izay notanana hatramin'ny nanokanana azy ho fampisehoana ny iPhone X. Aorian'ny fampisehoana ny valiny amin'ny volana febroary ho avy izao dia ho tonga mialoha ny famoahana isa marim-pototra fampahalalana fototra izay hahatonga ity teatra ity ho toerana mistika iray.
Ny orinasa rehetra dia tsy maintsy manambara ny fanolorana ny valiny amin'ny rafitra mpanara-maso, amin'ity tranga ity ny Kaomisionan'ny fiarovana sy fifanakalozana. Araka ny fomban-drazana, ity serasera ity dia iray volana mialoha, eo amin'ny volana Janoary. Saingy noho ny fanantenana fa hampiakatra ho an'ny mpitia Apple ity hetsika ity, ary ny fangatahana avo izay antenaina, Tian'i Apple ny manome fampandrenesana mialoha mba hitantanana tsara ny fandaminana an'ity hetsika ity.
Manomboka amin'ity fotoana ity, ireo tompon-trano izay maniry hanatrika ny hetsika dia azony a endrika ao amin'ny tranonkalan'i Apple hisoratra anarana.
Ireo laharan'orinasa dia mampiseho fivoarana marina, ary ankoatry ny angona farany, dia hankatoavin'ireo tompon-trano izy ireo. Ny olana ara-tsosialy hafa dia ho hita amin'ny fivorian'ny tompon-trano, na dia nolavin'i Apple aza izy ireo tamin'ny voalohany. Miresaka famaky roa indrindra isika: ny fananganana komitin'ny zon'olombelona ary tatitra momba ny fahafahan'ny orinasa manao mampihena ny vokatry ny etona entona.
Ary farany, misy ny vondrona manolotra a fahasamihafana lehibe kokoa amin'ny fitantanana ny orinasa, ary koa ny tahan'ny avo kokoa izay mitovy amin'ny isan'ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny toerana Apple mifandraika. Ity hetsika ity dia manolo-kevitra ny hanana lehilahy sy vehivavy samy hafa firenena sy firazanana.
Amin'ireo fandraisana andraikitra rehetra ireo, lny dome dia efa vetoing ny fihetsiketsehana tsirairay avy, manondro fa manana fivoarana marina izy amin'ireto sehatra ireto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Apple hanatontosa ny fivorian'ny tompon-trano amin'ny Steve Jobs Theatre
Plexamp, mpilalao mozika ho an'ny macOS aingam-panahy avy amin'i Winamp
Noel Gallagher sy Sam Smith tonga irery amin'ny Apple Music